Myanmar Defence Weapons: မြန်မာ့တပ်မတော် (ရေ)ရှိ စစ်ရေယာဉ်များ
sanaythar March 15, 2012 at 2:09 AM
အချက်အလက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ကျွန်တော်တို့သိ၇အောင်တင်ပေးတဲ့ ကို fulcrum နှင့် ကို mm တို့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ak March 15, 2012 at 3:08 AM
ဖတ်ရတာတော်တော်လေးပြည့်စုံပြီး ဗဟုသုတများစွာရရှိပါတယ်ဗျာ အသေးစိတ်ကိုအခုမှပဲသိရတော့တယ် အပိုင်း၂ ကိုလည်းဆက်လက်အားပေးပါအုံးမည်,စစ်ရေယာဉ်နံပါတ် ၄၁ ၊ ၄၂ ၊ အပြင် တပ်မတော်ရေမှ ရတနာပုံသဘောင်္အကြောင်းကိုလည်း ဖော်ပြပေးပါအုံးခင်ဗျာ ၊
န၀ရတ်၊နဂါးကြေး ဆိုတာဖျက်သိမ်းလိုက်သော ၅၀၁ ။ ၅၀၂ နံပတ်နှင့်ရေယာဉ်များကိုခေါ်တာဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်၊ ကို mm နှင့် ကို fulcrum တို့ရေ ဟုတ်မဟုတ်ပြောပေးပါအုံးဗျာ .. ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်
Cloud March 16, 2012 at 2:41 PM
ကို MM ရေ ။ Wiki မှာ မြန်မာ ရေတပ် က Gabriel (missile) တွေ သုံးနေတယ်လို့ ဖတ်ရတယ် ။ အဲ့ဒီ့ အကြောင်း ဟုတ်မဟုတ် ရေးပေးပါအုံး ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
prophecy March 19, 2012 at 10:04 PM
Some Data for 77 Series,
77m များရဲ့ အချက်အလက် တချို့ပါ .. 771 and 772 လို့ အတိအကျတော့မပါဘူးခင်မျ၊ ဖြစ်နိုင်တာက တည်ဆောက်ဆဲ ရဲ့ အချက်အလက်ဖြစ်ဖို့များပါတယ် GA plan မှာ no အတိအကျမပါတဲ့အတွက်ပါ.
Length Overall : 77.00 m
Length on waterline : 72m
Breath moulded Amid-ship 10.6 m
depth moulded amid-ship : 7.5m
test draft : 2.88m
test displacement ( Approx. ) 985.00 Tons
full draft : 3.10 M
full displacement ( Approx) 1080 tons
Camber 150 mm
fuel oil : 150 Tons
fresh water : 60 Tons
lub oil : 1 Tons
not less than 25 knots ( Displacement 985T
main engine output 2x 5180kW x 1000 rpm
max. range 250nm ataspeed of 18 knots
16 officers & 73 ratings
Mr thinker March 20, 2012 at 12:40 PM
ကိုသတိရမိပါတယ်။၄၁၅ မှာ auto-pilot လဲပါတယ်။
Min Thu December 1, 2013 at 6:06 AM
မြန်မာ ကကိုယ်ပိုင်ပြည်တွင်းထုတ် လေယာဉ်တင်သင်္ဘောရှိတယ်ဆို.. တချိုသတင်းတွေထျွှဲာဖတ်လိုက်ရတယ်.. ဟုတ်လားဗျ.
MM December 6, 2013 at 11:52 PM
မဟုတ်ရပါ.. လက်ရှိအချိန်မှာဆိုရင် Frigate တွေအပိုင်းကိုသာ အဓိကထား တည်ဆောက်နေကြတာပါ... ဖျက်သင်္ဘောအဆင့်တောင် မတက်ဖြစ်သေးပါဘူး...။ လေယာဉ်တင် တစ်စီးရဲ့ တန်ဖိုးကများလှပါတယ်...။